Nabad sugidda: Waxaa jira saansaamo falal aargudasho - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nabad sugidda: Waxaa jira saansaamo falal aargudasho
La cusbooneeyay torsdag 13 april 2017 kl 09.10
La daabacay onsdag 12 april 2017 kl 16.54
Shiikh Xuseen Faarah, imaamka xarunta dhexe dhaqanka islaamka Rinkeby.
Falka argagaxiso oo jimcihii ina soo dhaafay ka dhacay suuqa Drottninggatan ayaa ahaa dhacdo dalka iyo dadka aad u gilgishay. Raadiyaha Iswiidhan ayaa waraysi la yeeshay Xusseen Faarax oo ah imaam iyo qof bulshada soomaaliyeed ka dhaxmuuqda.
Jimcadii ina dhaaftay oo fal argagixis-nimo leh uu ka dhacay magaalada Stockholm ayuu xilligaasi Xusseen Faarax ku jiray shaqada. Bas ayuu waday. Wakhtiga dhibka dhacay waxuu ku sugnaa is-gooyska waddooyinka kungsgatan drottninggatan goobtaasina oo uu ka dhacay falka argagaxis-nimo.
-Waxaan arkay islamarkiiba dad cararya ka dib waan istaagnay. Si dagan ayaan dadka ugu sheegnay in ay baska ka dagaan.
Falkaan waxuu dadka ku beegay cabsi iyo walwal ayna is waydiyaan marka falka dhacaaye halkee ku sugneyd ama maxaad qabanaysay. Maalintaanina Xussein gabadhiisa oo dhigata fasalka koowaad ayaa sidoo kale ku maqnayd iyada iyo ardeyda fasalkeeduba meel aan ka fogeeyn drottninggatan.
Arrinta dhacday waxay ahayd mid murugo leh oo ay cid walba ka damqanayeen ayuu yiri Husseen Faarax. Meeshaa waxaa ku dhaawacmey 15 qof afarna wey ku dhinteen dhaawacyadii ka soo gaarey.
Falkaasi ayuu ka dambeeyay nin u dhashay dalka Uzbekistan.
Xuseen Faarax ayaa aamin-san in dhibaatooyinkaasi oo kale kolka ey dhacaan suurtagal noqon karto in dadka muslimiinta la beegsado. Sidoo kale wuxuu is-bedel ku iman karaa shuruucda dalka oo la adkeeyo iyo kooxaha xag-jirka oo ku kobca. Sidaa daraadeed dhibaato ayuu ninkani soo jiiday, sida uu aamin-san yahay Hussein.
Waxaa kale oo jirtaa inuu isniintii dhawayd uu madaxa ciidamada sirdoonka Anders Thornberg ka digay in ay dhici karto cunsuriyiintu in ay ku tallaabsadaan falal aargoosasho, iyo in ciidammada uu madaxda ka yahay ay la socdaan, ishana ku hayaan.
Xusseen Faarax ayaa kula taliyay soomaalida reer Sweden in loo baahan yahay in lala xiriiro ciidanka ammaanka ciddii wax loo geeysto oo aanay qarsan ama la aamusin, sidoo kale ciddii welwel uu ka hayana la xiriiri karaan masaajidda.